Banky Iraisam-pirenena : mila ezaka ny fitantanam-panjakana | NewsMada
Vonona hamatsy vola 230 tapitrisa dolara isan-taona (mandritra ny telo taona) ny Banky iraisam-pirenena. Hanampiana ny firenena marefo io vola io, saingy mila miezaka ny fanjakana amin’ny fomba fitantanany sy fampandrosoany an’i Madagasikara.
Nampahafantarina ny mpanao gazety, omaly, ny famatsiam-bola ho an’i Madagasikara avy amin’ny Banky iraisam-pirenena. Nilaza ny talen’ny tetikasa ho an’i Madagasikara, Mark Lundell, fa nampitomboina avo roa heny ny sorabola ho an’i Madagasikara, 230 tapitrisa dolara raha tokony ho 110 tapitrisa dolara. Natokana ho an’ny firenena marefo sy misy korontana io tetibola io. Nomarihiny anefa fa misy ny fepetra hivoahan’io vola io, amin’ny alalan’ny vokatra vitan’ny fanjakana, araka ny voafaritry ny “Paikady isaky ny firenena”.
Ho an’i Madagasikara, vokatra andrasana ny ezaka hanatsaran’ny mpitondra ny fomba fitantanana ny volam-panjakana.
Andrasana ny fanohanana ny tsy miankina
Eo koa ny ezaka azo tsapain-tanana maneho ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fiarahamonina sivily. Ao anatin’izany ny vokatra hita maso fa tena misy tokoa ny finiavan’ny fanjakana manohana ny mpandraharaha tsy miankina, hany afaka miteraka harena ho an’ny fanjakana sy mamorona asa. Mifandray an-dalana amin’ireo, ny fanomezana vahana ny tsy miankina hisian’ny fotodrafitrasa ampy ahafahana mamokatra, indrindra ny lafiny angovo sy ny lalana.
Manampy ireo, voafaritra ao anatin’ny fepetra takin’ny Banky iraisam-pirenena ny fitsinjovana ny lafiny sosialy sy ny maha olona. Ao anatin’izany ny vokatra azo tsapain-tanana amin’ny fampiroboroboroana ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Eo koa ny lafiny fanabeazana sy ny fahasalamana.
Amin’ny volana jolay vao ho fantatra
Tsy ho azo androany io sorabola 230 tapitrisa dolara isan-taona io, fa misy ny dingana samihafa sy fepetra tsy maintsy arahina. Handinika ny vaomiera ao anivon’ny Banky Iraisam-pirenena, arakaraka ny tatitra azony sy hitany. Aorian’izay, haroso any amin’ny filankevi-pitantanan’ny Banky iraisam-pirenena ny antontan-taratasy. Manana ny fandaharam-potoany anefa io filankevi-pitananana io, ka raha tsy misy ny fiovana, aorian’ny faran’ny volana jona (année fiscale), izany hoe, manomboka ny volana jolay 2016 ny hamantarana ny hahazoan’i Madahgasikara io 230 tapitrisa dolara isan-taona io, mandritra ny telo taona na tsia.